musha nyika dzakabatana Singers Kenny Rogers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaKenny Rogers inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, tinoratidzira mushakabvu muimbi-munyori wenziyo weAmerica. Inotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kukupa kuravira kweanobata chimiro chaKenny Rogers 'Bio, heino pikicha yekufananidzira yehupenyu hwake.
Hupenyu nekusimuka kwaKenny Rogers.
Hongu, munhu wose anoziva yezwi rake raspy uye dzakawanda hit nziyo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kenny Rogers 'biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Hupenyu hwepakutanga hwaKenny Rogers:
Kutanga kuenda, akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti “Mubhejeri.”Kenneth Ray Rogers akazvarwa musi wa21 Nyamavhuvhu 1938 kuGuta reHouston muDunhu reTexas, USA Aive mumwe wevana vasere vakazvarwa naamai vake, Lucille Rogers uye kuna baba vake, Edward Floyd Rogers.
Muimbi anozivikanwa weNyika ane mhuri inoda kudaidza 'Kenneth Ray' aive wekuAmerican nyika yedzinza rakasanganiswa neIrish neNative American mhuri yemhuri. Zvakare, Akakurira pamwe neguta rake rekuzvarwa muHouston padivi pehama dzake Barbara, Billy Rogers, Geraldine, Lelan Rogers, Randy Rogers, Roy Rogers naSandy.
Kenny Rogers akakurira kuHouston mudunhu reTexas, USA
Kukura pakuroorwa kwedzimba muHouston, Kenny mudiki aive nekurera nekuzvininipisa uye kwakaoma kurera nekuti vabereki vake vaive varombo. Saka nekudaro, akadzidza kuve-gwara kubva pazera diki uye akazviona ramangwana rake mumimhanzi kunyangwe pakange pasina wemhuri yake yepamoyo ane nhoroondo nehunyanzvi.
Mhuri yaKenny Rogers Nhoroondo:
Kutanga nevabereki vaRogers, baba vake - Edward Floyd Rogers, aive muvezi uye chidhakwa chinozivikanwa uyo akaona mitsara yakatetepa pakati pekuvaka, kugadzirisa uye kunwa kwechikamu chiri nani chehupenyu hwake.
Kudivi rake, amai vaKenny - Lucille Rogers aive mubatsiri wevanamukoti ainyatsoziva mabatiro ainoita vanhu, nekuda kwekurera vana vasere uye basa rakazara mutsetse wehutano.
Dzidzo yaKenny Rogers uye Basa Rekuvaka:
Pamwe chete, vabereki vaKenny vakaona kudzidzo yake kuWharton Elementary School uko kwaakaita zvakanaka kuzadzisa zvaidikanwa zvekupedza kudzidza asati aenderera kuJefferson Davis High School (yava kunzi Northside High School) zvakare kuHouston.
Paive paJefferson Davis High Chikoro ndipo pakavaka basa raKenny mumimhanzi zvakatanga nemoyo wese, paakazviwanira gitare ndokutanga kuimba nebhendi remimhanzi rinozivikanwa seThe Scholars
Yakanga iri kuchikoro chesekondari apo kuda kwake mimhanzi kwakatora nzira ine chinangwa.
Kenny Rogers 'Kwekutanga Basa Roupenyu:
Pakurekodha mashoma akarova emuno nemaThe Scholars, Kenny akaenda ega uye akaita nziyo diki dzinoverengeka asati ave chikamu che 'The Bobby Doyle Trio Jazz' boka rakapeta, richiisa Kenny kumashure panzira yebasa rega.
Kwakazotevera kuedza kwemimhanzi kwakaona Kenny achinyora asina kubudirira Jazz singles asati ajoina American folk mimhanzi boka 'The New Christy Minstrels' semuimbi uye kaviri bass player mugore ra1966.
Unogona here kuona iyo yemimhanzi prodigy yakasimudza mabass mune ino foto ficha naChristy Minstrels?
Nzira yekuenda Mukurumbira Biography Nyaya:
Fortunate yaKenny, Boka racho rakanga risiri kupa chikuva chinogona kumukurudzira kuti abudirire. Nekudaro akarega pamwe nedzimwe nhengo dzeboka dzaakatanga - Boka re'Kutanga Yekutanga 'na, akazozivikanwa sa'Kenny Rogers uye Wekutanga Edition'.
Iri boka rakaburitsa huwandu hwehits idzo dzakapfuurira kumusoro kwepop uye Nyika machati. Kuvandudzika uku kwakapa Kenny kusimudzira kusingafungidzirwe mukuvimba kwakamukurudzira kurega boka iri muna 1976 uye kugamuchira basa rake roga kweupenyu hwese.
Kuimba neiyo Yekutanga Shanduro yaive shanduko yebasa rake.
Simuka Kenny Rogers:
Kwangori mwedzi mukati meKega basa Rake, Kenny akauya neakarova solo Album 'Rudo rwakandisimudza' iro rakabudirira budiriro rakamupa zviratidzo zvekuti kubudirira kwake mumimhanzi kwanga kusisiri kure naye.
Pakabuditswa zita raKenny uye rechipiri studio album, 'Kenny Rogers' payakaburitswa muna 1977, akazopedzisira ave zita remumba semumwe weaalbum hit single 'Lucille' akamupa mubairo weGrammy weakanakisa kuita kwenzwi rechirume (1977).
Asides Lucille muimbi akaenderera mberi kuhwina mamwe akawanda maGrammy Awards mumakumi emakore akatevera.
VERENGA Justin Bieber Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Kenny Rogers 'Musikana, Wife uye Vana:
Zvinonzi kechitatu runako, asi Kenny akaita chisarudzo apo hupenyu hwake hwerudo hwakapfuura chikumbaridzo chakakurumbira. Muchokwadi, iye akasunga pfumo ka5 nemadzimai akabva pakuva musikana wake kumukadzi wake ipapo ex. Ivo vanosanganisira Janice Gordon uyo akamuberekera mwanasikana Carole naJean Rogers vasina kumuberekera vana vasati vaenda munzira dzakasiyana. Vamwe ndiMargo Anderson naMarianne Gordon avo vakamuberekera vanakomana Kenny Jr uye Christopher zvichiteerana.
Kenny Rogers nemumwe weaimbova vakadzi vake Marianne Gordon.
Kuroora kwaKenny Rogers naWanda:
Muimbi akazowana kugadzikana paakasangana naWanda Miller Rogers, mukadzi aive nemakore makumi maviri nemasere mudiki wake. Vakafambidzana kwemwedzi mishoma vasati varoora muna Chikumi 28, 1. Kubatana kwavo kwakamutsa kuzvarwa kwevanakomana vaviri - Jordan naJustin (vakazvarwa 1997). Mhuri yaifara iyo yaigara ichiwana zvikonzero zvekunamatirana kusvika pakufa kwaKenny munaKurume 2004. Unoziva here kuti mhuri yaKenny yaivapo pamubhedha wake paakaburitsa mweya wake wekupedzisira? Uku ndiko kwaive kuyerwa kwerudo rwavaive narwo kumuimbi.
Mufananidzo wakanaka waKenny Rogers nemukadzi wake Wanda Miller Rogers nemapatya avo.
Hupenyu Hwemhuri hwaKenny Rogers:
Matarenda makuru saKenny Rogers haangotangise zviripo anobva kumhuri dzinotsigira. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri dzenyaya.
Zvimwe Pamusoro paKenny Rogers 'Baba:
Baba vaKenny Edward Floyd Rogers aive muvezi chidhakwa. Nyaya yake nekudhakwa yakatanga mushure meHondo Yenyika II apo pakange pasina basa rakaringana rekutenderera kune vanoshanda veUS. Saka nekudaro, baba ve8 havana kufara nekusagona kwake kupa zvakakwana mhuri yake, budiriro yakamuita kuti atange kunwa. Kunyangwe zvakadaro, Kenny anomupa mbiri yekukwanisa kwake kuseka vanhu zvisinei nemamiriro epfungwa.
Zvimwe Zvakawanda Nezveamai vaKenny Rogers:
Amai vaKenny vaive mukadzi anonamata ane dzidzo yegiredhi rechitatu. Zvisinei, aive akazara nehungwaru uye akatove nebasa rakareba kwenguva yakareba semubatsiri mukoti. Kenny anomupa mbiri yekumumanikidza-kumupa iye pamwe nehama dzake nechitendero. Aigara achichengeta mabhaisikopo naKenny mumhanzi basa uye akambotsvaga kuziva kuti ndiye here mukadzi waakaimba nezvake murwiyo runosuruvarisa "Lucille". Neraki, anga asiri.
Mufananidzo usingawanzoitika waKenny Rogers aine nguva yakanaka naamai vake.
Nezve Kenny Rogers 'Vanun'una:
Kenny Rogers akakurira mukambani yevanin'ina ve7 vasina zvakawanda zvinozivikanwa nezve kunze kwemukoma wake Lelan Rogers uyo aive wedangwe pahama dzechisere. Kusiyana naKenny, Lelan aive rekodhi mugadziri uye rekodhi maneja wekambani kusvika parufu rwake muna 8. Vamwe vaMuimbi vamwe vana vadiki vanozivikanwa vanosanganisira hanzvadzi dzake Geraldine, Barbara naSandy apo vanin'ina vake vaive Billy Rogers, Randy Rogers naRoy Rogers.
Lelan ndiye ega hama yakakurumbira yaKenny Rogers.
Nezve hama dzaKenny Rogers:
Kure kubva kuna Kenny Rogers yemhuri yapedyo, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvemadzitateguru ake uye midzi yemhuri kunyanya iya yemadzisekuru ake nababa nasekuru. Saizvozvowo mutsetse, hapana zvinyorwa zvevaimbi vemainini, babamunini uye babamunini ivo vazukuru vake nanasekuru vasati vazivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Hupenyu hweKenny Rogers:
Mafani aKenny Rogers akapararira pasi rese anogona kureurura kune zvimwe chokwadi nezvehunhu hwake. Zvinosanganisira yake inoshamisa basa tsika, kusaziva kusaziva, rupo, pfungwa huru yekuseka uye kungwara kwepamoyo.
Zvakare, Kenny akange asina matambudziko nekuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwega uye akaita zviitiko zvakati kuti sekufarira kwake uye kuita zveupenyu panguva yeupenyu hwake. Izvo zvinosanganisira kukwikwidza kwetsvina, basketball, kutora mifananidzo, kutamba gitare, kutamba tenisi, kunyora uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Tennis chaive chimwe chezviitiko zvakaita runyorwa rwezvaanofarira kuita.
Mararamiro aKenny Rogers:
Waizviziva here kuti Kenny Rogers aive nemari inofungidzirwa kuti yaive pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora asati afa? Akaita kuwanda kwemari iyoyo kuburikidza nemumhanzi wake kuedza. Zvimwe zvekuita senge kuita uye kuoneka mune zvekushambadzira zvaita zvakanaka kuwedzera hupfumi hwake. Waizviziva here kuti Kenny aive zvakare muzvivakwa, uye aive neketani yekudyira - Kenny Rogers roasters?
Nekudaro, aive mumwe wevaimbi vapfumi munyika panguva yake aine asset uye mota dzisingashamisi dzaitaurirana kirasi yake. Vanosanganisira akawanda mota dzemuchina uye dzimba dzake dzemamiriyoni makumi mashanu kuCalifornia. Imba yacho ine makamuri Deluxe ane mamiriro ezvigadzirwa zveumhizha zvinosanganisira puru yekushambira, sauna nemitambo yemitambo. Mamwe aive Gym, jacuzzi, sinema, bara, hofisi yepamba pakati pezvimwe zvinhu.
Iye chokwadi aiziva bhora. Haana kudaro?
Chokwadi chaKenny Rogers:
Kuputira yedu Kenny Rogers nyaya yehucheche uye biography pano zvinozivikanwa zvishoma kana kutaurwa chokwadi pamusoro pemuimbi.
Rogers akamboita kureurura kuve achimanikidzwa-kunamatwa chitendero naamai vake vechiKristu. Nekudaro, hazvizivikanwe zvachose kuti akabudirira here pazviri kana kuti kwete. Asi izvo zvipenga zviri mukufarira Kenny kuve mutendi.
Asides mimhanzi, Rogers aive akakurumbira pakuonekwa kwake muvhi ra1982 'Six Pack'. Uye zvakare, iye anozivikanwa nekuonekwa kwake muTV akateedzana aive nemazita enziyo dzake dzakarova. Iwo ndiwo eGambler akateedzana, Kisimusi muAmerica, uye Coward weRuwa.
Kenny Rogers mu Six Pack (1982) bhaisikopo.
Kenny ane simba mukukwira uye mukurumbira wevamwe vaimbi vemumhanzi mimhanzi yakadaro Keith Urban, Dolly Parton, Donny Osmond, Don Henley uye wekupedzisira asi chaizvo kwete ari mashoma, Lionel Richie.
Kenny Rogers nevamwe vaimbi vakakura saLionel Richie anodzokera kumashure.
Vazhinji vaimbi nevakakurumbira vangada kuti vaonekwe nekitsi dzinoyevedza kana imbwa. Kenny akasarudza kusateedzera. Pane kudaro, aive nembudzi yemhuka inozivikanwa saSmithy. Maererano naye, smithy yaive shamwari. Anoti mbudzi yakamupa moyo wekunyaradza mushure mekufamba kwake kwenguva refu uye kunetseka.
Pashure peanoda kusvika makumi matanhatu-gumi emakore ebasa, Kenny akawana nzira muNyika Music Hall of Fame muna 60. Mugore iro, zita rake rakatora nzvimbo parutivi nevamwe varidzi vepamusoro nyika saJack Clement naBobby Bare.
Kenny Rogers Biography Chokwadi (Wiki Inquiries)
Zita rizere: Kenneth Ray Rogers
Akazvarwa: 21 Nyamavhuvhu 1938, Houston, Texas, United States.
Akafa: 20 Kurume 2020, Sandy Springs, Georgia, United States.
Chikonzero Chekufa: Chikonzero chinokonzeresa.
Vabereki: Edward Floyd Rogers (Baba) naLucille Roger (Amai).
Sibling: Lelan Rogers (Hama).
Ex Madzimai: Janice Gordon (m. 1958-1960), Jean Rogers (m. 1960-1963), Margo Anderson (m. 1964-1976) naMarianne Gordon (m. 1997-1993)
Mukadzi asati afa: Wanda Miller (m. 1997-2020).
Vana: Christopher Cody Rogers (mwanakomana), Kenny Rogers Jr. (mwanakomana), Carole Rogers (mwanasikana), Justin Charles Rogers (mwanakomana) naJoridhani Edward Rogers (mwanakomana)
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kenny Rogers Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!